Md. Gaashaan oo shaaciyay in wafti uu hogaaminayo M/wayne Faroole uu Puntland u matali doono shirka Nairobi ee Golaha Amniga. – Radio Daljir
Md. Gaashaan oo shaaciyay in wafti uu hogaaminayo M/wayne Faroole uu Puntland u matali doono shirka Nairobi ee Golaha Amniga.
Maajo 23, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, May 23 – Wasiiru-dawlaha maamul-wanaaga iyo madaxtooyadda Puntland mudane Maxamed Faarax Ciise ‘Gashan’ ayaa shaaciyay in wafdi uu hogaaminayo madaxwaynaha dawladda Puntland uu ka qayb-gali doono shirka khuseeya arrimaha Soomaaliya ee uu Golaha Guud ee QM ku qaban doono magaalada Nairobi 25-ka bishan.
Mudane Gaashaan ayaa sidaa u sheegay Radio Daljir maanta mar uu siiyay waraysi gaar ah oo uu sidoo kale kaga hadlay xalaada nabadgelyo ee Puntland iyo kormeer uu ku sameeyey imtaxaanadda dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada Galkacyo. Sida uu sheegay Mudane Gaashaan, waxa lagu wadaa in uu madaxwayne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo wafdigiisu ay maalinta barri ah (Talaado) ay ka ambabaxaan magaalada Boosaaso ee xaruna dhaqaalaha Puntland.
Md. Gashan oo maalintii shalay tegey magaalada Galkacyo ayaa gelinkii hore ee maanta waxaa uu booqday qaar kamid ah dugsiyada sare iyo kuwa dhexe kuwaasi oo ay si toos ah uga socdaan imtaxanadda shahaadiga ah ee dugsiyada.
Gashan ayaa soo hadal qaaday arrimaha nabadgelyada gobolka Mudug waxaana uu tilmaamay in arrimaha gobolka Mudug ay hada u muuqdaan kuwo kasoo raynaya isagoo maamulka hada kajira gobolka ku ammaanay sida ay uga shaqeeyeen sugisdda ammaanka magaalada Galkacyo oo mudooyinkii dambe ay marti u noqdeen dilal qorshaysan, weerarro gaadmo ah iyo rabshado kaladuwan.
Wasiirku waxaa uu shacabka ku dhaqan gobolka Mudug gaar ahaanna magaaladda Galkacyo ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada islamarkaana aysan fursad siinin dadka uu ku sheegay kuwo ku hawlan dibin daabyada iyo khalkhal gelinta shacbiga Puntland.
“Nabadgelyada aynu haysano ayaa la inoo diidayaa, horumarkaa yar ee aynu haysano ayaa cadow badani kujiraa, waxa weeye dad badan baa cadow u ah nabadgelyaddaa yar oo aan arki karin” ayuu yiri Md. Gashan “waxaan ugu baaqayaa shacabka Galkacyo inay xiraan albaabka cadowgu uga soo gelayo Puntland” ayuu intaasi ku daray Md. Gashan.
Maaha markii ugu horey oo masuul ka tirsan dawlada Puntland uu ka hadlo armi la xidhiidha nabadgelyadda Puntland waxaana hadalka wasiiru dawluhu kusoo beegmayaa xili mudooyinkii danbe hawl galo amaanka lagu xaqiijanayo laga wadey magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Khadar Cawl Ismaacil
Idaacada, Daljir. http://daljir.com/
Sarkaal sare oo ka tirsan Alshabab oo qirtay guul-darro; khasaaraha dagaalka oo sii badanaya iyo goobo horleh oo dagaalku ku fidayo.